Ny fananganana alika sy ny varotra dia nitombo be nandritra ny areti-mandringana Coronavirus
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny fananganana alika sy ny varotra dia nitombo be nandritra ny areti-mandringana Coronavirus
Ny valanaretina COVID-19 dia nanao fialofana, famonjena ary mpiompy dia nitombo ny fangatahana rehefa nanandrana nameno ny banga tamin'ny fiainany niova niaraka tamin'ny sakaizany ireo amerikana. Ireo izay tsy afaka naka alika satria niasa tontolo andro dia niova hevitra noho ny famerana ny hidim-baravarana sy ny fepetra hiasa an-trano.
Ny areti-mandringana COVID-19 dia azo antoka fa nitondra zavatra ratsy maro tamin'ny olona manerantany, anisan'izany ny tsy fahazoana antoka ary ny olana ara-pahasalamana sy ara-toekarena mafy. Saingy, raha misy zavatra tsara iray izay nateraky ny mitohy eo amin'ny fiainantsika, dia izany alika bebe kokoa ao amin'ny fianakaviana manerana an'izao tontolo izao.
Taorian'ny volana maro nikatona, izay nanery ny olona maro handany fotoana elanelana any an-tranony, dia tsapan'ny olona fa sakaizan'ny lehilahy tokoa ny alika. Amin'ity vanim-potoana ity, toeram-pialofana biby sy mpiompy manerana ny firenena nitatitra ny fangatahana alika amin'ny alàlan'ny alikaola.
Fifandraisan'ny alika olombelona mandritra ny areti-mandringana
Ny alika dia mitondra fifaliana betsaka amin'ny fiainantsika. Efa fantatry ny tompona biby izany. Azonao atao ihany ny manohitra ny rambon'ny alika mihorakoraka, ny oroka tampoka amin'ny maraina, ary ny faniriany hahita anao sambatra, izany no mahatonga azy ireo hanao zavatra goofy be mba hisarihana ny sainao.
Saingy, na dia ireo izay tsy nanana alika tamin'ny fiandohan'ny taona lasa aza ary tsy nahalala izay fifaliana azo amin'ny biby fiompy satria ny areti-mandringana dia nitondra fanovana maro teo amin'ny fiainany isan'andro.
Ny areti-mandringana COVID-19 mitohy dia nitondra fameperana betsaka tamin'ny fiainantsika, anisan'izany ny fanidiana, izay nahatonga ny olona handany fotoana be. Ho an'ireo izay miaina mitokana, manokana, ny fanidiana dia tena sarotra - ny sasany nahatsapa fahatsapana fa mitoka-monina, manirery, mitaintaina ary kivy.
Saingy tsy afaka malahelo lava ianao rehefa misy alika mahafinaritra ao an-trano mitady ny fitiavanao sy ny sainao. Noho io antony io dia nanomboka nanandrana nameno ireo banga ireo ny olona tamin'ny alàlan'ny alika am-pialofana na mividy ny alika tiany indrindra, na Golden Retriever, German Shepard, na Goldendoodle, ianao no manome ny anarany.
Tombony azo amin'ny fananana biby
Ahoana no ahafahan'ny alika manampy ny olona hiatrika mora kokoa ny areti-mifindra? Ny siansa no milaza fa manana tombony betsaka amin'ny fahasalamana ny fananana biby, anisan'izany ny fitantanana ny manirery sy ny fahaketrahana, fihetsem-po roa izay tsapan'ny olona maro nandritra ny areti-mandringana.
Fikarohana maromaro teo aloha no nilaza fa ny biby fiompy, indrindra ny alika, dia afaka manatsara ny fahasalamantsika, na ara-tsaina na ara-batana. Ny alika dia mamoaka ny olona mandehandeha, izay mahasoa ny fony, mandray anjara amin'ny fihenan'ny tosidra sy ny fihenan'ny tahan'ny kolesterola. Izy ireo dia mitazona antsika hiasa, izay manampy amin'ny fitazonana ny lanjan'ny vatana mety.
Izy ireo koa dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahatsapana ara-pihetseham-po, mampihena ny fanahiana, ny fihenjanana, ary ny alahelo mihitsy aza. Ary, noho ireo antony ireo, dia tsy mahagaga raha ny alika no nanjary fividianana olona marobe erak'izao tontolo izao, manampy ny tompony hiatrika ny areti-mandringana COVID-19 sy ny vokany rehetra.
Ny namantsika tongotra efatra dia manampy anay amin'ny fitantanana fihetsem-po ratsy toy ny manirery na mitokantokana amin'ny fanomezana namana tsotra fotsiny. Ankoatr'izay, ny fananana biby dia afaka manatsara ny fiainana ara-tsosialy ihany koa. Ny zavatra tsotsotra toa ny fandehanan'ny alikao eo amin'ny valan-javaboary na ny famoahana ny sarin'ny biby fiompinao ao amin'ny media sosialy dia afaka manampy anao hihaona amin'ny olona, ​​tia biby hafa.
Ary ambonin'izany rehetra izany, ny fananana biby dia toy ny fitsaboana adin-tsaina. Betsaka ny fanadihadiana no nahita fa ny fandaniana minitra vitsy monja amin'ny biby dia afaka mampihena ny fitaintainanana sy ny tosidra raha mampitombo ny sérotonine sy ny dopamine. Noho izany, rehefa mampiady saina antsika ny areti-mandringana, ny alikantsika dia afaka manampy antsika hiala sasatra ary hamela ny eritreritra ratsy.